Budata 360 Total Security maka Windows
Free Budata maka Windows (1.35 MB)
Budata 360 Total Security,
360 Total Security bụ antivirus software na-enye ndị ọrụ keukwu nchedo nje ha kọmputa, yana bara uru ọzọ atụmatụ dị ka kọmputa osooso na junk faịlụ ihicha.
You nwere ike ịnweta ụdị adịchaghị nke 360 ​​Total Security site na njikọ dị nokpuru.
360 Total Nche Adịghị
Etu esi etinye 360 ​​Total Security?
Na vidiyo dị nokpuru, anyị agwala gị otu esi etinye usoro mmemme nchekwa zuru ebe niile na kọmputa:
Nwere ike i scanomi ma hichaa nje na kọmputa gị site na 360 Total Security, mmemme antivirus ị nwere ike ibudata ma jiri nefu. Ihe omume ahụ na-enye ndị ọrụ 3 nhọrọ nyocha nke nje virus dị iche iche. Ndenye i scanomi, Full ianomi na Custom ianomi nhọrọ-enye gị ohere ike i scanomi nje dị ka gị mkpa. Kwadoro site na njirimara njirimara nje dị iche iche nke 360, 360 Total Security na-enyocha faịlụ ndị ibudatara na ịntanetị na-akpaghị aka, na-echekwa azụmaahịa gị nịntanetị, nwere ike igbochi weebụsaịtị ọjọọ, ma kpuchido ozi nkeonwe gị site na ịchekwa kamera weebụ gị, site na njirimara nchebe ya.Na mgbakwunye, 360 Total Security, nke na-enyocha akpaghị aka USB na ngalaba nchekwa mpụga ị jikọọ na kọmputa gị, na-enyekwara ndị ọrụ aka na nchekwa netwọkụ.
360 Total Security nwere ike ime ka mmalite kọmputa gị dị ngwa site na ịlele maka ihe ndị na-amalite na akpaghị aka na mmalite. Na mgbakwunye, 360 Total Security, nke nwere ike ịchọpụta faịlụ mkpofu na sistemụ gị, na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ ndị a na otu ịpị ma bulie arụmọrụ nke diski ike gị jikọọ na kọmputa gị, na-enye gị ohere ịnweta ohere nchekwa nefu.
360 Total Security nwere ike-atụle dị ka a free antivirus omume nke bara uru na atụmatụ-ọgaranya na awade elu virus nchedo.
360 Total Security Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.35 MB
Mmepụta: Qihoo 360